အဆိုပါ Hadoop developer အင်တာဗျူးကွဲအက် | ၎င်းတို့အားသင်တန်း
Hadoop developer အင်တာဗျူးကွဲအက်
အဘယ်အရာကို Hadoop ပြုစုသူအကြောင်းလဲ?
ဘယ်လို Hadoop အထောက်အကူဖြစ်စေပါသလဲ
အဆိုပါ Hadoop အင်တာဗျူး crack ဖို့သိကောင်းစရာများနှင့်လှည့်ကွက်
Apache ကို Hadoop ဟာအခမဲ့ open-source ဖြစ်၏ Java-based programming ကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံအားဖြင့် appropriated သိုလှောင်မှုအတွက်စီစဉ်ထားခြင်းနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့် Big Data အဖြစ်လူသိများအချက်အလက်များ၏အပိုင်းကအရမ်းကိုကြီးမားအတိုင်းအတာ၏ပြင်ဆင်နေဖြန့်ချိ။ ဒါဟာသင် Hadoop developer အင်တာဗျူးကွဲအက်အတွက်အသီးအနှံများရှိပါတယ်ဒါကြောင့် Hadoop နှင့်၎င်း၏လျှောက်လွှာ၏အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များတိုးမြှင့်အချိန်အတန်ကြာအထောက်အကူပြုရန်သင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအပေါ်တစ်ဦးအကြောင်းနားလည်တဲ့ရွေးချယ်မှုအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားစေနိုင်ပါသည်။
ကျနော်တို့ကဝေဖန်တစ်ဦးသောအဘို့ကိုတစ်ဦး gander ယူသင့်ပါတယ်ပူးတှဲကျမ်းပိုဒ်၌သငျသငျကုရှိဆင်းသက်ဖို့စွဲလမ်းနှင့်ဆင်ခြင်တစ် Hadoop developer အဖြစ်သိမ်းပိုက် animating သောဖြစ်ရပ်အတွက်မှတ်မိဖို့ရှိသည်အလေးပေး။
သင်ဘာသာရပ်ဖို့လုံးဝအသစ်အသောဖြစ်ရပ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုထုတ်ကုန်ဆော့ဖ်ဝဲရေးသူထက်တစ် Hadoop ဆော့ဖ်ဝဲရေးသူ၏ဖြစ်ရပ်နှင့်အတူစတင်ကြကုန်အံ့။ နှစ်ဦးစလုံး codes တွေကိုနှင့် programming ကိုရေးသားတာဝန်ခံများမှာအဖြစ်အမှန်တကယ်နှစ်ခုအကြားရုံတစ်ခု unpretentious ဆနျ့ကငျြဘလည်းရှိ၏။ အဓိကဆနျ့ကငျြဘ Hadoop developer တစ်ဦး Big Data ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အလုပ်လုပ်တယ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ကြီးမားသတင်းအချက်အလက်ဓလေ့ထုံးတမ်းသတင်းအချက်အလက်ပြင်ဆင်နေ applications များ၏ကိုင်တွယ်အင်အားသုံးအတိတ်နေသော petabytes, exabytes နှင့် zettabyte အတွက်တိုင်းတာအချက်အလက်များ၏ကျယ်ပြန့် volumes ကိုမှ alludes ။
Hadopop ၏အကြီးမားဆုံးသောနှစ်သက်သောရှုထောငျ့ကအချက်အလက်များ၏ကြီးမားတဲ့အတိုင်းအတာကိုကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ, ခရီးသွားလုပ်ငန်း, လူမှုရေးအာမခံ, ရန်ပုံငွေအတွက်အလုပ်လုပ်ထုတ်ပြန်ခြင်း, ဒါကြောင့်ထွက်စေကြီးကြပ်, ဖြိုဖျက်နှင့်သတင်းအချက်အလက်များ၏များပြားလှသော volumes ကိုကိုင်တွယ်ရန် Hadoop လိုအပ်သည်။
အခြားအဆင့်တွင် Hadoop ထိုနည်းတူဒဏ်ခံအပြစ်တင်နေသည်။ ဒါဟာမူဘောင်လျှင်မြန်စွာတစ်ဦးပျောက်ဆုံးအချက်အချာတစ်ခုအခါသမယ၌အခြားသောဧရိယာမှ migrates ကြောင့်အတားအဆီးမတိုးတက်မှုကမ်းလှမ်းဆိုလို။
သငျသညျအမြိုးမြိုးသောရှေ့ပြေးပုံစံ၏ကြီးမြတ်သတင်းအချက်အလက်များလိုအပ်ပထမဦးဆုံးအရေးပါမှုတဲ့ကိစ္စအဖြစ်, ထင်မြင်ချက်, စံချိန်စံညွှန်းဖော်ပြထားပါတယ်နှင့်ဒါကြောင့်အပေါ် Hadoop ပါဝင်သည်။ အားလုံးပိုမိုပြင်းထန်စွာသင်သတင်းအချက်အလက်လျှောက်ထားရန်စွမ်းရည်ရှိသည်ဖို့သင့်၏။ ထို့အပြင် အကယ်. သင်သည်တန်ဖိုးရှိရှိလမ်း၌သင်တို့၏အမြင်များတိုးတက်နိုငျသောရည်မှန်းချက်နှင့်သင်၏ relational စွမ်းရည်ထက်မြက်။ သင့်ရဲ့အာကာသနှင့်အတူတတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့ Be နှင့်ဤလယ်ပြင်၌ရှိသောပစ္စုပ္ပန်နှင့်မျှော်လင့်ထားသည့်ပုံစံများနှင့်အတူပြင်ဆင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်။ အဲဒီမှာလုံ့လဝီရိယအလုပ်မရှိအစားထိုးဖြစ်ပြီး, မှန်ကန်သောပစ္စည်းများနှင့်လုံ့လဝိရိယအလုပ်အတူသင်တစ်ဦးကထိပ်တန်းအဆင့်ကိုအသင်းအဖွဲ့အတွက် Hadoop developer အဖြစ်သင့်စိတ်ကူးယဉ်အလုပ်ရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့ဘယ်လိုထိထိရောက်ရောက်ထွက်တွက်ဆနိုင်ပါတယ်စိတ်ထဲထားပါ။